Isku xirnaanta xawaaraha sare meel kasta oo ka mid ah Kanada, Boqortooyada Midowday, Alaska iyo Gobolka Arctic
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Isku xirnaanta xawaaraha sare meel kasta oo ka mid ah Kanada, Boqortooyada Midowday, Alaska iyo Gobolka Arctic
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Investments • News • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dayax-gacmeedkan ugu dambeeyay ee OneWeb wuxuu gelin doonaa baaxad-xawaare aad u sarraysa meel kasta oo ka tirsan Waqooyiga Hemisphere dabayaaqada sannadkan.
OneWeb waxay xaqiijineysaa bilaabitaan guul leh iyo xiriirinta dhammaan 36 dayax-gacmeedyada la bilaabay goor hore oo maanta ah, taasoo wadarta guud ee meerayaasha ku wareejineysa 254 dayax-gacmeed.
Isku xirnaanta xawaaraha sare si looga helo Waqooyiga Pole ilaa 50th isbarbar socda - waxaa ku jira Boqortooyada Ingiriiska, Kanada, Alaska iyo Gobolka Arctic.
Wadadii loogu talagalay caymis caalami ah oo dhammaystiran Juun 2022 oo leh xiddig LEO ah oo ah 648 satellites.
OneWeb, oo ah shirkadda isgaarsiinta dayax -gacmeedka ee Low Earth Orbit (LEO), ayaa maanta ku dhawaaqday inay si guul leh u billaabatay 36 dayax -gacmeedyo si ay u calaamadiso dhammaystirka hawlgalkeeda 'Shan illaa 50'. Iyada oo ay ku jirto dhacdadan weyn, Shirkadda ayaa diyaar u ah inay gaarsiiso isku xirnaanta guud ahaan Boqortooyada Ingiriiska, Kanada, Alaska, Waqooyiga Yurub, Greenland, iyo Gobolka Arctic.
Daahfurka ugu dambeeyay wuxuu qaadanayaa isku-xidhka meeraha ee OneWeb ilaa 254 satellites, ama 40% OneWebDiyaaraddii qorshaysnayd ee 648 LEO satellites-ka oo bixin doona isku xidhka caalamiga ah ee xawaaraha sare leh. OneWeb wuxuu damacsan yahay inuu adeeg caalami ah ka dhigo 2022.
Banaanbaxyada adeeggu waxay xagaagan ka bilaaban doonaan dhowr goobood oo muhiim ah - oo ay ku jiraan Alaska iyo Canada - iyadoo OneWeb isu diyaarinayso adeeg ganacsi lixda bilood ee soo socota. Bixinta adeegyada isku-xirnaanta heerka ganacsiga, Shirkaddu waxay durbadiiba ku dhawaaqday iskaashi qaybinta dhammaan warshado iyo meherado ay ka mid yihiin BT, Shabakadda ROCK, Kooxda AST, PDI, Isgaarsiinta Alaska iyo kuwa kale, maadaama OneWeb ay ballaarineyso awooddeeda caalamiga ah. Shirkaddu waxay sii wadaa inay la shaqeyso bixiyeyaasha isgaarsiinta, ISPs, iyo dowladaha adduunka oo dhan si ay u siiso adeegyadeeda isku-xirnaanta xawaaraha sare leh waxayna aragtaa baahida sii kordheysa ee xalalka cusub si loogu xiro meelaha ugu adag in la gaaro.
Daah -furka 36 dayax -gacmeed ee ugu dambeeyay waxaa sameeyay Arianespace oo ka socota Vostochny Cosmodrom. Xil -ka -qaadistu waxay dhacday 1dii Luulyo saacaddu markay ahayd 13:48 BST. Dayax -gacmeedyada OneWeb ayaa ka soocay gantaalka waxaana lagu sii daayay 9 dufcadood muddo 3 saacadood ah 52 daqiiqo iyada oo la xaqiijiyay in la helay dhammaan 36 dayax -gacmeedyada.
Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska, Rt. Mudane. Xildhibaan Boris Johnson, ayaa yiri: “Dayax-gacmeedkan ugu dambeeyay ee dayax-gacmeedyada OneWeb wuxuu dhigi doonaa baaxad ballaadhan oo ballaadhan oo ay gaadhi doonto dhammaan Waqooyiga Hemisphere dabayaaqada sannadkan, oo ay ku jirto hagaajinta isku-xidhka qaybaha ugu fog UK.
“Waxaa taageeray Dowladda Ingiriiska, OneWeb waxay caddeyneysaa waxa suurta gal ah marka maalgashiga dadweynaha iyo kan gaarka loo leeyahay ay isu yimaadaan, taasoo UK ka dhigeysa safka hore ee teknoolojiyadda ugu dambeysay, furitaanka suuqyo cusub, iyo ugu dambeyn beddelka nolosha dadka adduunka oo dhan.”